manawphyulay leftacomment for han zawJun 27han zaw is now friends with SuWai, wai phyo thu, Aung Thet Oo and K3lvin moreJul 30, 2011U Tin Nyunt and han zaw are now friendsFeb 1, 2011han zaw postedablog postသူ​တို့​ပြော​တဲ့ - ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ် Open SourceOpen Source ကို ပွင့်လင်း​ရင်း​မြစ်၊ ဖွင့်​ထား​သော​ရင်း​မြစ်​လို့ မြန်မာဘာသာ​ပြန် ထား​တာ​ကို မှတ်သား​ဖူး​ပါ​တယ်။ ''Open Source ကို အခ​မဲ့​လို့ အဓိပ္ပါယ်​ပြန်​ရင် မဟုတ်​သေး​ဘူး။ အခ​မဲ့​လို့​ပြော​ရုံ​နဲ့ မ​လုံလောက်​ဖူး​ဖြစ်​နေ​တယ်။ ကျွန်တော်​က Software တစ်​ခု​ကို ရေး​တယ်။ သူ့​သ​ဘာ​ဝ​အရ Bug ရှိ​တယ်။ Software က ကြီး​လာ​ရင် ဒီ Bug ကို ကျွန်တော်​တစ်​ယောက်​ထဲ စုံလင်​အောင် Fit မ​လုပ်​နိုင်​ဘူး။ Open Source က အဲ​ဒီ​လို​မဟုတ်​ဘူး။ လူ​တိုင်း​က Bug တွေ​ကို လိုက်​ရှင်း​နိုင်​တယ်။ အဲ​ဒီ​အခါ​မှာ Software ရဲ့…See MoreJan 30, 2011 0
han zaw updated their profileJan 26, 2011မြတ်သွင် commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"@Tun ကိုထွန်းမေးတဲ့ ဝီကီပီးဒီးယား or ဝီကီပီးဒီးယ လားဆိုတာ.. ဝီကီပီးဒီးယားပါ။ ဝီကီအစည်းအဝေးမှာ ပီဒိယတွေ၊ ပီဒီယားတွေ၊ ပီးဒီးယားတွေက တခါ ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ဗ​ဟို​စာ​မျက်​နှာ​ ကို အပ်ဒိတ် လုပ်ဖို့က ဝီကီဖေါင်ဒေးရှင်းရဲ့ တာဝန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့…"Jan 26, 2011မြတ်သွင် commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"(တယောက်ထဲရေးလို့ တက်လာတဲ့ အကြောင်းအရာ ၁ သောင်းမမြင်ချင်ဘူး၊ အယောက် ၁ဝဝ ရေးတဲ့ အကြောင်းအရာ ၁ဝဝဝ ကပိုတန်ဖိုးရှိတယ်။ ဘာကြောင့်ဆို wiki မို့ပါ။ ) ကိုမြင့်ကျော်သူ ပြောတာ ကြိုက်ပါတယ်...။ reference ပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို အဓိကထားပြီး ကျွန်တော်တို့ တင်ပါတယ်..။…"Jan 26, 2011Myint Kyaw Thu commented on han zaw's blog post မြန်မာ​ဝီ​ကီ​ပီး​ဒီး​ယား​နှင့် ပရဟိတ​စိတ်ထား​သူ"@Ko Lionslayer, why are you so defensive of wiki writing? Let forget wiki and just say, I write something I don't really know on MITP (ရိပ်ဖမ်းသံဖမ်းနဲ့ dict အားကိုးနဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်တယ်). Will you accept this? Did I do the right thing? Is this…"Jan 26, 2011 More... RSS
At 9:40am on June 27, 2014, manawphyulay said… No comments yet!